Sababahaan ayay dumarku sheegeen in ay u jecelyihiin ragga dhaadheer | Raganimo University
Sababahaan ayay dumarku sheegeen in ay u jecelyihiin ragga dhaadheer
February 15, 2019~1 minute
Dumar badan ayaa jecel ragga dhaadheer oo xitaa marka ay guurdoonka yihiin niyada ku haya in ay helaan nin iyaga ka dheer balse waa maxay sababta dhabta ah ee dumarka ay ku jecelyihiin ragga dhaadheer? Dumarka qaar ayaa aaminsan in ragga dhaadheer ay galmada kaga fiicanyihiin kuwa kale, halka kuwa kale ay iska jecelyihiin in ay la socdaan nin iyaga ka dheer.
Horta marka dhinaca sariirta laga hadlo, ragga dhaadheer waxba ma dhaamaan kuwa gaaban. Ninkasta waxa uu la soo shir tagayaa waa qalabkiisa iyo farsamadiisa. Iyadoo xitaa la sheego in ragga gaaban ay mararka qaar ka gus weyn yihiin kuwa dhaadheer. Xaga qancinta dumarka wax faa'iido ah oo dhererku uu leeyahay haba yaaraatee ma jidho.
Dumarka qaar ayaa sheega in ay jecelyihiin in ay dareemaan naagnimo oo sidaa darteed marka ay la socdaan ninka ka dheer ay sidaa dareemayaan. Iyagoo ka fikiraya indhaha dadka kale iyo sida loo arkayo haddii ay gabadhu la socoto nin ka gaaban. Arintaan ayaa macquul ah marka laga fiiriyo haddii gabadhu aysan ka fikirayn arimaha kale ee qiimeynta mudan, sida dabeecada ninka iyo waxtarkiisa galmada.
Balse haddii aad tahay gabar raadinaysa nin ay mustaqbalka la dhisato waxaa muhiim ah in aad ka fikirto waxyaabaha muhiimka ah. Haddii ninku uu noqdo mid dabeecad xun ama ku liita dhinaca sariirta, ogoow dhererkiisu waxba kuu faa'iideyn maayo.